जगिंङ गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदै फाइदा - ज्ञानविज्ञान
जगिंङ गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदै फाइदा
1 month ago Pradeep Karki
हरेक दिनको दौडाइ अर्थात् जगिंङले शरीरमा आखिर के फाइदा गर्छ ? अमेरिकाको मायो क्लिनिकलगायत केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले लामो रिसर्चपछि नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् :
–मांशपेशी स्ट्रेचिङ हुन्छ र बलियो बन्छ । हड्डी पनि मजबुत बन्छ ।
–शरीरमा थुप्रिएको बोसो पग्लिएर पसिनासँगै बाहिरिन्छ र तौल घट्छ ।
–पूरै शरीरमा रक्तसन्चार सहज हुन्छ । ब्लड प्रेसरको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
–इन्सुलिन बन्ने प्रक्रिया ठीक भएर रगतमा सुगरको मात्रा कन्ट्रोल गर्छ ।
–हर्ट बिट रेगुलर हुन्छ । मुटुरोगबाट बँच्न सकिन्छ ।
–शरीरमा एडरालिन नामक हर्मोन सही प्रक्रियामा बन्छ र राम्रो निद्रा पर्छ ।
–फोक्सोको पनि कसरत हुन्छ, स्वासप्रस्वाससम्बन्धी रोगबाट बच्न सघाउँछ ।
–दिमागमा रगत र अक्सिजनको सन्चार राम्रोसँग हुन्छ । डिप्रेसन र स्ट्रेसको समस्या हुँदैन ।
–शरीरका कोशिकाहरु बलिया हुन्छन् र इन्फेक्सनबाट बचाउँछ ।
–अनुहारमा रक्तसंचार राम्रो हुँदा प्राकृतिक चमक आउँछ ।
जगिङ गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा :
–हेवी डाइटिङ गरेर जगिङमा ननिस्किनुहोला । हेवी डाइटिङलगत्तै जगिङ गर्दा डाइजेस्टिव मसल्समा असर पार्छ । पेट दुख्ने, उल्टी हुने तथा पखालाको समस्या पर्न सक्छ । हेवी खानापछि कम्तिमा तीन घन्टापछिमात्रै जगिङ गर्नुपर्छ । हल्का नास्ता पनि एक घन्टा पहिल्यै खाएको हुनुपर्छ ।
–जगिङमा निस्किनुअघि धेरै पानी पिउनु ठीक होइन । सोडियम लेभल कम भएर दिमागका सेल्समा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । एक घन्टा दौडिने योजना हो भने दौडिनुभन्दा एक घन्टाअघि दुई गिलास पानी पिउनुहोला । केही बेरमा बाथरुम जान सकिन्छ । दौडिनुभन्दा तत्काल अगाडी चाहिँ आधा गिलास पानी पिउँदा फरक पर्दैन ।
–जुत्ता राम्रो रोज्नुहोस् । हिल भएको र निकै कँसिलो जुत्ता लगाउनु हुँदैन । दौडिनुअघि स्ट्रेचिङ र वार्मअप पनि गर्नुहुन्न । नसामा समस्या निम्तिन सक्छ । सुरुमा हल्का दौडिने, बिस्तारै–बिस्तारै । मांशपेशी केही तातेपछि मात्रै दौडको दर बढाउन सक्नुहुन्छ ।
योगा गर्नै पर्ने १६ कारणहरु
मानिसले निश्चय नै आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर्काई ‘डान्स’ गर्छन् तै पनि भनेजस्तो हुँदैन । एरोबिक, ब्याडमिन्टन, कराँतेजस्ता खेल पनि मान्छेले स्वस्थ्य रहने उपायकै रूपमा लिन्छन् । स्वस्थ्य रहन अपनाइने यस्ता अभ्यासले मानिसलाई सामान्य फाइदा पुर्याए पनि पूर्णता भने दिएको हुँदैन ।
शारीरिक अभ्यासका रूपमा जबसम्म योगलाई आत्मसात् गरिँदैन अरू कुनै उपायले त्यो सन्तुष्टि दिनै सक्दैन । योग त्यस्तो माध्यम हो जसले शरीर र आत्मालाई एकाकार गर्दछ र मान्छेलाई स्वस्थपनको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउँछ । अरू व्यायामभन्दा योग नै किन ? भन्ने जिज्ञासुहरूका लागि निम्न बुँदा उपयोगी साबित हुन्छन् ।
१) स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूका अनुसार रोग लाग्नुको कारणमध्ये शरीरमा ‘फ्रि रेडिकल’ बढ्नु पनि एक हो । फ्रि रेडिकलले हाम्रो कोषिका तथा डीएनएलाई विकृत गर्छ । फ्रि रेडिकल बढ्ने कारणमध्ये अत्याधिक थकानयुक्त कसरत (जिम, एरोबिक, दौड आदि) पनि एउटा हो । योगको अभ्यासपछि भने शरीरमा हल्कापन आउँछ र फ्रि रेडिकल बढ्न पाउँदैन ।
२) अन्य अभ्यास तथा कसरतले शरीरको बाहिरी भाग र मांशपेसीलाई मात्र धेरै प्रभाव पार्छ भने योगले सम्पूर्ण अंग–प्रत्यङ्ग तथा कोषलाई समेत प्राणवान् र स्वस्थ बनाउँछ ।
३) शारीरिक अभ्यासका अन्य विधि खर्चिला हुन्छन् । सहयोगी, साधन, ठूलो स्थान आदिको आवश्यकता पर्दछ । योग भने खर्चबिना नै गर्न सकिन्छ । न त सहयोगी नै चाहिन्छ न ठूलो ठाउँ न उपकारण नै । योग अभ्यासका विधिबारे राम्रो जानकारी राख्यो भने एक्लैले गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन ।
४) अन्य अभ्यासमा मन तथा इन्द्रीयलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रक्रिया नै छैन । तर, योग अभ्यासले मन र इन्द्रीय नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
५) योग मात्र यस्तो अभ्यास हो, जसका हरेक अभ्यासमा स्वासप्रस्वासको गहिरो प्रभाव र प्रयोग हुन्छ । जसबाट प्रयाप्त अक्सिजन ग्रहण गर्ने क्षमताको विकास हन्छ ।
६) योगका लागि धेरै खुराक आवश्यक पर्दैन, सामान्य खाना पर्याप्त छ । तर अन्य अभ्यासमा ‘हेभ्भी डाइट’को आवश्यकता पर्दछ ।
७) योगमा मात्र शरीरलाई खुम्च्याउने, तन्काउने र सिथिल गर्ने अभ्यास छ । जसबाट अत्यन्त कम शक्ति खर्चिएर शारीरिक तथा मानसिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । कमजोर व्यक्तिले पनि योगको फाइदा लिन सक्छन् ।
८) योगमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने तथा विजातीय द्रव्यलाई निष्कासन गरी शरीरलाई रोगमुक्त बनाउने प्रक्रिया हुन्छ तर अरू अभ्यासमा त्यो पाइँदैन ।
९) जति ‘रिढ’ लचिलो हन्छ त्यति नै शरीर स्वस्थ रहन्छ । यौवन, युवापन र शरीरमा स्फुर्ती आउँछ । ‘रिढ’को लचकता बढाउने राम्रो अभ्यास योगमा छ ।
१०) योगाभ्यासले सम्पूर्ण नशा–नाडी तथा रक्तनली शुद्ध गर्छ । अरू शारीरिक व्यायाममा यस्तो पाइँदैन ।
११) योगमा फोक्सोलाई पर्याप्त खुम्च्याउने र फैल्याउने अभ्यास छ । जसले अक्सिजन लिने क्षमता बढाउँछ तर अन्य व्यायाममा यो प्रक्रिया छैन । अन्य अभ्यासमा गहिरो स्वास लिने प्रक्रिया छैन जसले गर्दा फोक्सोको कम भाग मात्र सक्रिय रहन्छ ।
१२) अहिलेको रहनसहन तथा खानपिनको अवस्था विकृत बन्दै गएको छ । योगमा खाना तथा जीवनशैली व्यवस्थापनका विषयमा जीवनोपयोगी जानकारी पाइन्छ ।
१३) अन्य अभ्यासमा पाचन प्रणाली बिग्रने, लामो समयपछि हाडजोर्नी तथा मांशपेसी दुख्ने जस्ता समस्या आउन सक्छन्, तर योगमा त्यस्ता कुनै ‘साइड इफेक्ट’ हुँदैन ।
१४) योगले अहिंसा, शान्ति, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, मनको निग्रह, बुद्धि विकास, सत्गुण विकास तथा समग्र जिउने तरिका सिकाउँछ ।
१५) शरीरमा हर्मोन्स तथा इन्जाइमको सन्तुलन मिलाउन र शरीरलाई सक्रिय एवं ऊर्जावान् बनाउन योगले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
१६) शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विकासका लागि योग सर्वोत्तम पद्धति हो, यसको दाँजोमा अन्य कुनै पनि शारीरिक व्यायाम आउनै सक्दैनन् । स्वस्थ्य रहनका लागि शारीरिक व्यायामका अन्य उपायभन्दा योग कैयौं गुणा फाइदाजनक रहेको अभ्यास र अनुसन्धानले नै देखाएको कुरा हो ।
अतः स्वास्थ्यका लागि सक्षम योगगुरुको आवश्यकतालाई भने भुल्न हुँदैन । सुरुका दिनमा टीभी तथा सीडीका आधारमा योग सिक्नुभन्दा योगगुरुको निगरानीमा सिक्नु राम्रो हुन्छ ।
यस बारे पनि जान्नुहाेस्ः
योगा गर्नुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गरौं नत्र जटिल समस्या निम्तिन सक्छ !
स्वस्थ्य शरीर, मस्तिष्क र आत्माको लागि योग तथा साधना एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । तर, योगा गर्दा केही सावधानी अपनाउनु नै पर्छ । योगा गर्दा केहि नियम अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । उक्त नियम पालना नगर्दा योगाबाट फाइदा मात्र हाेइन यसले समस्या समेत ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
के के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ त ?
१. योगा गर्नसाथ तुरुन्तै नुहाउनु हुँदैन । योग गर्दा शारीरिक तापमान बढ्छ । त्यसैले योग गरेको एक घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ । नभए, रुँघा, खोकी जस्ता समस्या आउन सक्छ ।
२. योगा गरिरहेको समयमा बाथरुममा जानु उचित हुँदैन । बरु, आफ्नो शरीरको पानी पसिनाको माध्यामबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ ।
३. योगा गरिरहेको बेला शरीर तातो हुन्छ । यतिबेला चिसो पानी पनि पिउनु लाभदायक हुँदैन । चिसो पानीले एलर्जी, खोकी लाग्ने संभावना हुन्छ ।
४. वज्रासन बाहेक अन्य कुनैपनि योग खाना खानसाथ गर्नुहुन्न । खाना खाएको कम्तिमा पनि तीन घण्टाको अन्तरालमा योग गर्नु सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो त बिहान खाली पेटमा योगा गर्नु नै उत्तम हाे ।
५. योगा कठिन आसनबाट सुरु गर्नु हुँदैन । सरलबाट कठिनतिर जानुपर्छ ।
६. जब तपाई बिमार हुनुहुन्छ भने योगा नगर्नुहोस् । यदि योग गर्न चाहनुहुन्छ भने योग गुरु वा चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस् ।
७. योगा गर्नुअघि थोरै वार्मअप गर्नुहोस् । यसपछि प्राणायाम र त्यसपछि योग गरौं । अन्त्यमा शवासन जरुर गरौं ।
८. योग गुरुको सल्लाह वा निगरानी बिना जथाभावी योग गर्नु हुँदैन । किताब पढेर वा सिडीमा हेरेर योग गर्दा समस्या हुनसक्छ । अर्काको देखासेखी पनि योग नगरौ ।
९. कम्मर र मांशपेशी वा घुँडासँग सम्बन्धित कुनै समस्या छ भने योग गर्नुअघि विज्ञसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
Don't Miss it अँग्रेजी भाषा सजिलाे तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? जान्नुहाेस
Up Next आफ्नाे लागी उपयुक्त करियरकाे छनाेट यसरी गर्नुहाेस् ?
हामीले आफुमा कसरी सुधार ल्याउने ? जान्रुहाेस्
प्रख्यात भनाइ नै छ, “सँसार परिवर्तन गर्नु छ भने, पहिले आफुबाट सुरू गर” । त्याे परिवर्तन, त्याे सुधारले हामीलाइ सफलता…
6 days ago Pradeep Karki
तपाइकाे कतै दिउँसै सपना देख्ने बानी त छैन ? यस्ता छन् फाइदै फाइदा
हामीले कसैले आफ्ना याेजना सुनाउँदा व्याङ्ग्य गर्छाैँ, “दिउसै सपना देखिस् कि के हाे ?” । निदाउदा त जाे सुकैले सपना…
कसरी बढाउन सकिन्छ आफ्नाे इच्छाशक्तिलाइ ? जान्नुहाेस्
सुरू नै नगरी सफलता मिल्दैन । त्यसैगरी सुरू गरिसकेपछी सफलताकाे लागी धैर्यता र लगनशीलता चाहिन्छ । त्यसकाे लागी दृण इच्छाशक्तिकाे…
दिमागलाई नकारात्मक साेचबाट टाढा राख्नकाे लागी यस्ता बानी अपनाउनुहाेस्
जति व्यस्त सह्याे नकारात्मक साेचबाट त्यतिनै टाढा रहन सकिन्छ । त्यसैले आफुलाइ जतिसक्दाे व्यस्त राख्नुहाेस् । काम गरेर, नाचेर, गाएर,…
पैसा बचतकाे लागी यी दैनिक साधारण बानीहरू अपनाउनुहाेस्
पैसा सबथाेक हाेइन । तर, आफ्नाे दैनिक जिवन निर्वाह गर्न र आफ्ना सपनाहरूलाइ आकार दिन पैसाकाे आवश्यकता पर्छ । आफुसँग…
नफाल्नुहोस् मुलाको पात, यस्ता छन् यसका फाईदा
हामी मुला मात्र खान प्रयोग गर्छौ र मुलाको साग फाली दिन्छौ । यसमा धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ जसले हामीलाई धेरै…
गर्मीमा काँचो प्याज खानुका अपत्यारिला फाइदा ! पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
गर्मी महिनामा प्याजलाई निकै फाइदाजनक मानिन्छ । काँचो प्याजलाई दैनिक खानामा समावेश गरे यसले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्यालाई राहत प्रदान…
7 months ago biplov
याद गर्नुहाेस् ! तपाइ ब्यस्त हुँदा बच्चाहरूमा बढी रहेकाे छ यस्ताे समस्या
शहरका मध्यमवर्गीय परीवारकाे धेरै बच्चाहरू सायकोटिक डिप्रेशनकाे शिकार भइरहेका छन् । याे समस्याबाट उनीहरूलाइ बचाउनकाे लागी तपाइले आफ्नाे समय ब्यवस्थापन…
पनिर खानुका फाइदा, ​यस्ता छन्
-एक सय ग्राम पनिरमा ११ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । त्यसैले शाकाहारीका लागि यो निकै उपयोगी खाद्यपदार्थ हो । -पनिरले तौल…
बर्डफ्लु के हो ? किन हामी लापरवाही गर्दैछौ ?
केही समययता लगातार जस्तो छाइरहेका समाचारका हेडलाइन हुन् यी । ‘बर्डफ्लु’ हाम्रो लागि नौलो शब्दावली होइन । यसले केही बर्षअघि…
थाहा पाउनुहोस, कुन ब्लग्रुप भएकाले के खाने ?
समूह एबी यो कम मान्छेमा पाइने गु्रप हो । यो गु्रप भएका मान्छेले बढी सावधान रहनुपर्छ । फलफूल र अत्यधिक…
के हो अटिजम ? बालबालिकामा अटिजम के कारणबाट हुन्छ ? एकपटक पढौ
संसारमा अटिजम र एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ सिन्ड्रोमका (एडिएचएस) लक्षण भएका बालबच्चाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ। यस्ता लक्षण भएका…
अब युट्युबको कडाइ
युट्युब अहिले धेरैका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ । युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेपछि गुगलले त्यसमा छोटा विज्ञापन राखिदिन्छ । र,…
कसरी हाँस्दा शरीरलाई फाइदा पुग्छ ?
हामी यदि हाँस्छौ भने, त्यसले हामीलाई खुसी तुल्याउँछ । हामीलाई मात्र होइन, हामी आसपासका मौहल पनि रमाइलो बन्छ । साथमा…
भान्छामा औषधी (29)
व्यक्तित्व विकास (8)
सामान्य ज्ञान (55)